Agarsiisa Islaayidii - Sochii Fakkinaa Mammiloo filadhu
Kamshaa Fakkassaa irraa cuqaasi
Sochii Fakkinaa Baratamoo
Tarreeffama Sochii Fakkiinaa
Tarreen sochii fakkinaa, islaayidii ammaaf sochii fakkinaa hunda agarsiisa.
Islaayidiin kamiyyuu sochii fakkinaa tokko kan yeroo islaayidiin ka'e agarsiisu qaba.
Yommuu boca mul'atuu kan hojjatuu sochiwwan fakkiinaa hedduun jirachuu malu. Boca fakkaafama kanneen keessaa tokkoolee yoo jiraatee, sochii fakkiinichaa keessatti tarreffama. Caancalii tokkoon tokkoon maqichaa bobbocaa sochii fakkiinaa adeemsiisuu mul'isa.
Tarree sochii fakkinaa irra galtee sochii fakkinicha filatamee haqa.
Galtee sochii fakkiinicha filatamee tarre keessa oli fi gaditti sochosuuf qabdoota keessa tokkoo cuqaasi.
Cuqaasuun - hanga hantuutee itti aanuutti sochiin fakkiina irratti dhaabbata.
Isa duuraanitin - sochiin fakkiinicha yeruuma saniti hojjata.
Isa duuraanitin boodatti - sochiin fakkiinicha duuraa dhuumeen hojjata.
Sochii fakkinaaf amaloota dabalataa fila. Qabduu ... cuqaasuun qaaqa Dirqalaalee Galteewwanii, bakka amloota irraa filattuufi fayyadamtu bana.
Yomuu ramaduu galteewwan haaraa yookin guulaalaman dura mul'isuuf fili.
Duragii keessatti galtee sochii fakkinicha filatamee taphata.